महराले ‘क्लिन–चिट’ नै पाए पनि सभामुखमा फर्किने सम्भावना छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई - Narayanionline.com
काठमाडौं, असोज १५-
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सभामुखको राजीनामा नै स्वीकृत भएकोले उक्त पद रिक्त भएको बताए । महराले ‘क्लिन–चिट’ नै लिए पनि अब सभामुखमा फर्किने सम्भावना नभएको भट्टराईको दाबी छ ।
उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको र फरक लिंगको हुनुपर्ने पनि बताए । अहिले संसद चालु नभएकोले अब चल्ने अधिवेशनमा संविधानबमोजिम निर्वाचन हुने उनले स्पष्ट पारे । भट्टराईले यो प्रकरणमा रोशनी शाहीमाथि अविलम्ब अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘शाहीको अघिल्लो बयानले महरामाथि अनुसन्धान हुन्छ, तर, पछिल्लो बयानले शाहीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । उनीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।’
भट्टराईले मन लाग्यो भन्दैमा कसैको इज्जत, प्रतिष्ठा र मानमा धावा बोल्न नपाइने स्पष्ट पारे । उनले यदि शाही डिप्रेसनको बिरामी हो भने त्यसबारेमा पनि चिकित्सकले परीक्षण गरेर पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘महिलाको पनि इज्जत छ, पुरुषको पनि इज्जत छ । रोशनीजीको कुन चाहीँ स्टेटमेन्ट सही हो ?’ उनले शाहीले महरामाथि लगाएको आरोप पुष्टि भयो भने कसुरअनुसार सजाय हुने पनि जीकिर गरे । उनले भने,‘यौन दुव्र्यवहार, गाली गलौज, बलात्कार यी सबैमा कसुरअनुसार सजाय हुन्छ, बलात्कारको केसमा अधिकतम १५ वर्षसम्म सजाय हुन्छ, सामान्य यौन दुव्र्यवहार हो भने ३ वर्ष र कुटपिट छ भने १ वर्षसम्म सजाय हुन्छ । कुन खालको अपराध हो, त्यो हेरेर सजाय हुन्छ ।’
शाहीले आफू डिप्रेसनको बिरामी भएको भन्ने कुरा पत्यारलाग्दो नभएको पनि उनको भनाइ छ । उनले भने,‘यदि उहाँले भनेजस्तो हो भने यो कुरा मानसिक सन्तुलन गुमाएको कुरा चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनुपर्छ ।’ उनले शाहीको भनाइलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएकोले अब उक्त पदको लागि निर्वाचन हुनैपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सभामुखको राजीनामा शसर्त हुँदैन् । राजीनामा भनेको राजीनामा नै हो । अब सभामुख पद रिक्त भयो । निर्वाचन हुनैपर्छ ।’
बहुदलीय प्रणाली भएकोले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यो प्रकरणमा ‘फस्ट इन्फरमेशन’ का आधारमा प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन दर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘फस्ट इन्फरमेसनका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ पीडित भनिने महिलाले अलग–अलग अभिव्यक्ति दिए पनि पहिलो सूचनाको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने उनको जीकिर छ ।
अहिले शाहीले बयान फेरेको कुरालाई उनले ‘एक्स्ट्रा जुडिसियल डकुमेन्ट’ भएको पनि बताए । यदि यो प्रकरणमा महराले क्लिन–चिट पाए महराको सांसद पद सुरक्षित रहने पनि उनको भनाइ छ । निर्दोष सावित भएपछि सांसद पद सुरक्षित हुने भएकोले सभामुखको निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवार बनाएर सभामुख बन्न पनि सक्ने उनको तर्क छ । उनले शाहीको बाहिर आएको पहिलो भिडियाको आधारमा महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएको बताए । यदि पहिलो भिडियोमा लगाएको आरोप गलत सावित भए उनलाई साइबर क्राईमको मुद्दा चलाउन सकिने पनि उनको तर्क छ । शाहीमाथि यदि कसैले ज्यान मार्ने धम्की दिएको हो भने पनि कसले धम्की दिएको भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएनकी महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलले शाहीमाथि जवरजस्ती करणी भएको हो कि दुव्र्यवहारमात्रै भएको हो भन्ने एकिन भएपछि दोषिमाथि सोहीअनुसारको सजाय हुने तर्क गरिन् । यो प्रकरणमा के भएको हो ? भन्ने कुरा सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भनिन्,‘यो घट्नाबारे सिंगो राष्ट्र नै जानकार छ । भोलि त्यस्तो घट्ना नहोस् भनेर यो प्रकरणमा सत्य, तथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।’उनले सत्ताको शक्तिले उक्त घट्नालाई मोड्न नहुने पनि ध्यानाकार्षण गराइन् । उनले महिलालाई अन्याय भएको भए न्याय दिनुपर्ने र महरालाई पनि गलत आरोप लगाईएको हो भने प्रतिष्ठामा आँच पुगेको सुनाइन् ।
कोरोना भाइरसको उद्गम चीनको वुहानमा ७६ दिनपछि लकडाउन अन्त्य
नेतालाई सार्वजनिक ठाउँमा गाली गर्न नपाउने नेकपा सचिवालयको निर्णय
विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागी यि आचारसंहिता पालनाको शर्त पूरा गर्नुपर्ने
हेटौंडा कुलेखानी–फाखेल सडकको यातायात सञ्चालन
नेपालमा पर्यटक आगमनमा ८० प्रतिशत गिरावट
सरकारको तीन वर्ष पूरा, प्रधानमन्त्रीले आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने
अत्याधुनिक पेस्तोलसहित ६ जना पक्राउ